कसरी खुवाउने बालबालिकालाई? जान्नुहोस् टिप्स – Everest Dainik – News from Nepal
कसरी खुवाउने बालबालिकालाई? जान्नुहोस् टिप्स
काठमाडौंः बाल्यावस्था शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि विकासको अवस्था हो । यो समयमा बालबालिकालाई पोषणको अत्यधिक खाँचो हुन्छ । तर, पोषणबारे उपयुक्त जानकारीको अभावका कारण आर्थिक अवस्था कमजोर भएकामा मात्र नभई हुनेखाने वर्गका बच्चामा समेत पोषणको कमी हुने गरेको पाइन्छ ।
जन्मेदेखि ६ महिनासम्म आमाको दूध मात्र खुवाएमा बच्चामा प्रशस्त पोषण पुग्छ । ६ महिनापछि उनीहरूलाई अन्य नरम ठोस खानेकुरा खुवाउन सकिन्छ । घरमा बनाएको खान नमान्ने भन्दै स्कुले नानीहरूलाई बाहिरको खाजा खुवाउने चलन बढ्दो छ । थोरै भए पनि बच्चालाई आफ्नो भान्सामा पाकेको स्वस्थ खाना खुवाउनुपर्छ । बजारमा पाइने पौष्टिक भनिएका प्याकेटका खानेकुराको सट्टा घरमै बनाएको जाउलो, उसिनेको आलु, राम्ररी पकाइएका गेडागुडी, सागपातजस्ता खानेकुरा बढी पोषिलो हुन्छन् ।
५–६ पटक खुवाउने
पाँच वर्षमुनिका बच्चाहरूले एकैपटकमा धेरै खाना खान सक्दैनन् । उनीहरूलाई समय–समयमा खुवाउनुपर्ने हुन्छ । घरमै बनाएर अन्न, सागपात, फलफूल, दूधजन्य पदार्थ तथा अलि–अलि गरेर माछा, मासु र अन्डा खुवाउन सकिन्छ ।
सकभर आफैँ खान दिने
बच्चालाई मनपर्ने खाना आफैँलाई खान दिनुपर्छ । विशेषगरी, सहर–बजारतिर बच्चा सात–आठ वर्षको हुँदासम्म आमाले खुवाउने गरेको पाइन्छ  । यसले कुपोषण निम्त्याउने गरेको पाइन्छ । बच्चा नौ महिनाको भएपछि आफ्नै हातले खान दिनुपर्छ । सुरुमा पोख्ने वा खान अरुचि गर्ने गर्छन् । तर, परिवारका अन्य सदस्यसँगै खुवाउँदा बिस्तारै बानी पर्दैे जान्छ । जबरर्जस्ती खुवाउने गर्नुहुँदैन, जसले उनीहरूको दिमागमा असर पार्न सक्छ । त्यस्तै घरको खाना खान मानेन भनेर फास्टफुड, ड्राइफुड आदि खानेकुरा खुवाउने गर्नुहुँदैन । यो जानकारी जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. अरुणा उप्रेतीले नयाँ पत्रिका दैनिकमा लेखेकी छिन् ।
ट्याग्स: Baby, food